« Sômaroho! Tour”: efa eto ireo vahinin’i Wawa | NewsMada
« Sômaroho! Tour”: efa eto ireo vahinin’i Wawa
Hahazo ny anjarany mialoha amin’ny “Sômaroho!” ny eto Antananarivo. Hiaka-tsekatra etsy amin’ny Coliseum ireo vahinin’i Wawa, izay ho any Nosy Be koa.
Tsy vahiny eto Madagasikara intsony ry Toofan, Serge Beynaud ary Bacoili. Efa samy nasain’i Wawa sy ny ekipany hiseho taty, ary tsy mahafoy ka mbola tonga ihany, izy ireo, handray anjara amin’ny “Sômaroho! Tour” 2017. Hanampy azy ireo i Singuila, izay efa nizara ny fahamaizany hihaona amin’ny mpankafy aty Madagasikara, tamin’ny alalan’ny “video” miparitaka anaty tambajotra sosialy.
Samy hanafana ny seho goavambe, izay hotontosaina etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe ireto vahinin’i Wawa ireto, ny alahady 30 jolay ho avy izao. Amin’ny 10 ora dia efa hanomboka ny fety ka hanokatra izany ireo mpanakanto malagasy nasaina manokana koa, toa an’i Stéphanie sy Toyah.
Vantany vao vita io seho goavana io, hihazo avy hatrany an’i Nosy Be ny rehetra. Any rahateo ny tena ivon’ny fanamarihana ny “Festival Sômaroho!”, izay hotontosaina ny 2 hatramin’ny 6 aogositra izao.
Mikasika izay “Festival Sômaroho!” any Nosy Be izay indrindra, mampilaza ireo mpanjifa any an-toerana ny orinasa Telma, amin’ny fisiana olona mitady hisandoka. Misy olon-dratsy mandefa SMS milaza fa misy fisarihana mety hahazoana fiara mantsy, mandritra ny hetsika. Amin’ny maha mpanohana ofisialy ny Telma, manao fanambarana izy fa tsy misy mihitsy karazan-dalao na fifaninanana, na amin’ny alalan’ny SMS izany, na amin’ny alalan’ny antso, na amin’ny tambajotran-tserasera isan-tsokajiny, nokarakaraina anatin’ny “Somaroho Tour! 2017”. Mamarana ny “Somaroho! Tour” ny “Festival Sômaroho!” Any Nosy Be, ary mbola manamafy ny Telma sy ny komity mpikarakara fa tsy nisy ihany koa fifanarahana amina hetsika hafa nataon’izy ireo nandritra ny fihodinana.